ရောင်းရန် grinder ရောနှောအစာကျွေး,ကျွဲနွားအစာအတွက်သေးငယ်သောလယ်ယာအစာကြိတ်ခွဲစက်
ပါဝါ:7.5kw + 3kw
စွမ်းရည်:500~ 750kg / h
ဤအစာကြိတ်ခွဲစက်နှင့်ရောနှောစက်ကိုအဓိကအားဖြင့်တစ်ချိန်ကခြောက်သွေ့သောတိရိစ္ဆာန်အစာအမျိုးမျိုးကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်ရောစပ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။. ဝက်အူပေါ်ကို, ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်ရောနှောခြင်းတစ်မျိုးတည်းတွင်စုစည်းထားသည်, ဒါကြောင့်သေးငယ်တဲ့နေရာနှင့်တပ်ဆင်ရန်နှင့်သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်. ပြီးတော့ feed crusher and mixer သည်ကုန်ကြမ်းများကိုသူ့ဟာသူစုပ်ယူနိုင်သည်။ ဒေါင်လိုက် feed crushing mixer, သေးငယ်တဲ့takesရိယာကြာ All- န်းကျင်အာဟာရ feedstock ထုတ်လုပ်ရန်သင့်လျော်သည်. ထုတ်လုပ်မှုပမာဏက ၂၅၀ ကီလိုဂရမ်မှ ၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ်မှဖြစ်သည်,အစာကြိတ်ခွဲစက်ရောနှောစက်သည်ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်ရောနှောခြင်း၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပေါင်းစပ်သည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးဖြစ်သည်. အစာကြိတ်ခွဲစက်ရောနှောစက်သည်သေးငယ်သောလယ်ယာနှင့်အစာကျွေးသည့်စက်ရုံအတွက်သင့်တော်သည်. အစာကြိတ်ခွဲစက်ရောနှောစက်သည်ပါ ၀ င်သည့်လည်ပတ်မှုပုံစံများကိုအသုံးပြုပြီးပစ္စည်းများကိုတက်။ တက်စေနိုင်သည်, ဘယ်ဘက်နဲ့ညာရွှေ့ပါ,ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကရောနှောစက်ကိုရောနှောပေါင်းစပ်ပေးတယ်,ဒါကြောင့် feed crusher mixer ကရိုးရှင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ် သေးငယ်တဲ့လုံးလေးထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ.
အသေးစားလယ်ယာအစာကြိတ်ခွဲစက်ရောနှောခြင်း - အားလုံးသံမဏိကိုယ်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, သောသံဖြင့်ပျက်စီးစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ကျောက်, ချိတ်ကိုပိတ်ထားသော feed grinder ရောနှောစက်ထဲသို့အခွံအပျက်အစီးများ, နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့၏စီးဆင်းမှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ပါဝါပရိသနှင့်အတူတ. ကြက်ဘဲအစာကြိတ်ခွဲစက်ကိုအစားအစာတွင်အသုံးပြုသည်, ကောက်ပဲသီးနှံခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ကောက်ရိုးများကိုခုတ်ထွင်ခြင်းဖြင့်အာလူးရိုက်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်,မွေးမြူရေးအစာကြိတ်ခွဲစက်သည်တောင့်တင်းသည့်အစာအမျိုးမျိုးကိုကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်နိုင်သည်, ထိုကဲ့သို့သောပြောင်းဖူးအဖြစ်, ငရုတ်သီးစိမ်း, ဘောဇဉ်, ပဲ, ပြောင်းဖူး cob,ခြောက်သွေ့သောဂျုံကောက်ရိုး,ဆန်ခွံ,ဂျုံ brans,သေးငယ်တဲ့အကိုင်းအခက်,နှင့်အခြားသူများ. ရဟတ်တွင်တည်ဆောက်ခြင်း, အဘယ်သူမျှမသေဆုံးထောင့်နှင့်အတူကုန်ကြမ်းကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်, ချောထုတ်ကုန်ပိုပြီးပင်လိမ့်မယ်.
လည်ပတ်ရန်ခလုတ်ကိုအပြည့်အဝရွှေ့နိုင်သည်,ကြက်ဘဲအစာကြိတ်ခွဲစက်ကိုလည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်. In- built တံဆိပ်ခတ်ဖုန်မှုန့်ထွက်ယိုဖိတ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ, ပုံမှန်ပတ်ဝန်းကျင်ကြိတ်ခွဲခြင်းအပေါ်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ခြင်းနှင့် clean.can သယ်ဆောင်ပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ရှောက်လော့, ပါးလွှာသောကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်သေးငယ်သောကြိတ်ခွဲခြင်းများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်. ထို့ကြောင့်အသေးစားလယ်ယာအစာကြိတ်ခွဲစက်ကိုအကြီးစားနှင့်အလတ်စားအစာကျွေးသည့်စက်ရုံ၏ကုန်ကြမ်းကြိတ်စက်များတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့သည်, အပင်စက်ရုံ, အစားအစာထုတ်ကုန်စက်ရုံနှင့်ဒါပေါ်မှာ.
crusher နှင့်ရောနှောသတ်မှတ်ချက် feed ကို